Isku keenista qoyska - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Isku keenista qoyska
Sidee baa qoyskaagi ku keensan kartaa Finland?
Haddii aad doonayso inaad qoyskaagi Finland keento, waa in aad adigu marka hore haysato sharci daganaasho ah.
Markii aad sharciga qaadato, la xiriir qoyskaaga dibadda jooga ee aad doonayso inaad keento. U sheeg in ay tahay inay iyagu Finland sharci daganaansho ah ka soo codsadaan. Waxaad ka codsataa inay buux-buuxiyaan codsiga sharciga daganaanshaha lagu codsado oo ka dib geeyaan safaaradda Finland. Waana in ay foomka xerayntiisa balan u qabsadaan.
Foomka waxaa laga buuxsan doonaa internetka wixii ka dambeeya sanaka 2017 laga bilaabo. Laakiin saas oo ay tahay waa in ay safaaradda Finland balan ka qabsadaan si ay foomka u geeystaan oo arintooda loo eego.
Safaaraddaha Finland ee ku kala yaala wadamo kala duwan aduunka waxaad ka helaysaa bogga wasaaradda arimaha dibadda ee loo yaqaan Ulkoasianministeriö oo ciwaankeedu hoos ku yaal.
Wadan kasta kuma taal safaaradda Finland. Dadka qoyskaaga ah waxaa dhici karta inay khasab ku noqoto inay u safraan wadan kale. Markaas oo laga rabo inay dalkaas fiisihiisa haystaan. Fiisahaas waxaa laga rabaa mudada ay dalkaas joogaan oo dhan inay haystaan oo uu shaqaynayo. Waxaa laga rabaa safaardda markay dalabka foomka geeysanayaan inay fiisaha tusaan.
Finland dadka usoo guuraya oo imaanaya waxaa laga doonayaa sida guud in biilkay ku noolaan lahaayeen markay yimaadaan uu meel u saaran yahay. Taas macnaheedu wuxuu yahay in tusaale ahaan ay dadku Finland shaqo ku haystaan oo mushahar qaataan. Hase ahaatee dadka qaxootiga ah qodobkani ma taabanaho oo ma khuseeyo. Qoyskaaga waa laguu keeni karaa Finland, marka aad adigu sharci lee dahay.
Marka aad hesho magan-galyo siyaasadeed ama laguu qaato inaad tahay qaxootiga la keeno oo la soo qaato, la xiriir qoyskaaga dibadda jooga. U sheeg in ay ku xeraystaan sharciga daganaanshaha ah ee Finland saddex bilood gudaheed.
Haddii ay qoyskaagu mudadaas la soo sheegay ka dib dalbadaan sharciga daganaanshaha ah, waxaa markaas khasab noqonaysa in biilkii iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen Finland meel la saaro oo qofka dalbanayaa taas u sugo.
Waxaad ka akhrin kartaa arintan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan bogga internetka ee xafiiska emagarayshanka ama Maahanmuuttovirasto.
Maxaa caddaymo loo baahan yahay?
Xubnaha qoyskaaga waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan caddayn sheegeeysa waxa aad isu tihiin iyo inay qoyskaagi yihiin. Waxaa tusaale ahaan caddayn u noqon kara warqadda dhalashada ama warqadda nikaaxa. Caddaymuhu waa in ay asal orijinaal ah yihiin, waana in lagu soo tarjumo afka finnishka ama ingiriiska. Haddii aysan caddaymo wadan waa in ay safaarada Finland balan kaleeto oo cusub ka qabsadaan. Balantaas oo qoyskaaga la waraysanayo oo interfiyuu lala yeelanayo, waxaa kaloo laga yaabaa in laga qaado saamiga-DNA-da. Saamigu wuxuu sheegayaa tusaale ahaan inaad wax isku tihiin iyo in kale.
Qof da'diisu ka yar tahay 18-sano kaligiis ma dalban karo sharciga daganaanshaha ah. Waalidka ama qofka ka masuulka ah ayeey khasab ku tahay inuu u buu-buuxiyo oo u saxiixo codsiga ilmaha. Waxaa sidoo kale laga rabaa inuu caruurta u raaco safaaradda Finland oo codsiga la geeyo. Ilmaha waxaa laga rabaa inuu jooga goobta oo la socda marka dalabka la xeraynayo.
Haddii ay caruurtu badan yihiin, mid kasta waxaa laga rabaa dalab gaar ah sharciga daganaanshaha loogu dalbayo in loo buuxiyo.
Finland qofka u jooga isaga maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo?
Adiga laftigaaga Finland jooga waxaa lagaa rabaa inaad buux-buuxiso foom caddayn ah. Foomkaas u dir dadka qoyskaaga ah ee xagga jooga ee dalbanaya sharciga daganaanshaha ah. Qofka qosykaaga ah ayaa foomka laga rabaa inuu geeyo safaaradda Finland. Foomka waxaa laga buuxsan doonaa internetka wixii ka dambeeya sanaka 2017 laga bilaabo.
Xagee laga helaa foomamka?
Foomamka waxaad ka helaysaa bogga afka finnishka ku qoran ee emagarayshankao, halkaas oo aad ka daabacan karto oo la soo bixi karto foomamka. Foomamka waxaad ku buuxinaysaa luuqqadda finnishka, ama iswidhishka ama ingiriiska.
Internetka foomamka waad ku dhex buuxsan kartaa laga bilaabo sanadka 2017 ka dhex buuxi ciwaanka internetka ee www.enterfinland.fi.
Lacag intee le'eg ayaa ku baxaysa isu keenista qoyska?
Ka go'aan gaarista daganaanshaha waxaa ku baxaysa 445 yuuro sanadka 2016. Lacagta waxaa lagaa rabaa inaad bixiso marka codsiga la xeraynayo. Xafiiska Pakolaisten vastaanotto kaama bixinayo lacagta.
Yaa go'aanka ka gaaraya keenista qoyska oo soo ogolaanaya?
Xafiiska emagarayshanka ee Maahanmuuttovirasto ayaa siinaya xubnaha qoyskaaga sharciga daganaanshaha ah. Ka hor inta uusan siin xafiiska emegarayshanku wuxuu baarayaa arimaha qoyskaaga. Wuxuu baaryaa warqaddaha dhalashada iyo kuwa nikaaxa. Xafiiska emagarayshanku sidoo kale wuxuu waraysanayaa xubnaha qoyska, wuxuuna ka qaadayaa saamiga-DNA-da.
Keenista qoysku waxay qaadataa bilo fara badan.
Haddii xubnaha qoysku helaan sharci daganaansho ah
Haddii ay xubnaha qoyskaagu helaan daganaansho Finland ah, iyaga ayaa laga rabaa inay soo qaban-qaabsadaan safarkooda Finland. Waxaa laga rabaa inay baasabooro haystaan oo tigidhada iyo kharashka la baxaan.
Talo-bixin iyo caawimaado ku saabsan buux-buuxinta foomamka
Haddii aad ku hadasho afka finnishka ama ingiriiska waxaad talo dheeraad ah weydiin kartaa xafiiska emagarayshanka ee Maahanmuuttovirasto. Waxaad sidoo kale talo weydiin kartaa
Xafiiska qaabilaadda qaxootiga ee Pakolaisten vastaanotto shaqaalihiisa
Shaqaalaha xafiiska Maahanmuuttoinfo oo luuqaddo kala duwan ku hadla
ama shaqaalaha shariikadda Setlementi.
Waxaad caawimaad foomamka buux-buuxintooda ah ka helaysaa shaqaalaha xafiisyada kala ah Maahanmuuttoinfo iyo Setlementi.
Halka laga helo
Xafiiska waaxda socdaalka ee imagarayshanka ama Maahanmuuttovirasto
0295 419 600
Maahanmuuttoinfo oo luuqaddo kala duwan kuugu adeegaya
03 621 2560